क्वारेन्टाइनमा एकै जनाले २० जनाको खाना खाएपछि हंगामा, यस्ताे रहस्य थाहा पाएपछि माेदी समेत चकित — sancharkendra.com
१सुशान्तको मोबाइल फरेन्सिक रिपोर्ट सार्वजनिक, आ’त्मह’त्या अघि गुगलमा सर्च गरेका थिए यी कुरा
२आज एकैदिन थपिए ७४० जना नयाँ कोरोना संक्रमित, कहाँ कति ?
३फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीद्वारा एकाएक राजीनामाको घोषणा, निकाले यस्तो विज्ञप्ति
४तपस्वी बम्जनलाई १४ वर्ष जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर, अब के हुन्छ ?
५गोप्य वार्तामा ओली-प्रचण्डबीच के भयो कुराकानी, बैठकमा संगै रहेका बिष्णु पौडेलले गरे यस्तो खुलासा
६सकियो ओली-प्रचण्डबीचको तीनघण्टा लामाे वार्ता, के भयो सहमति ?
७तीन घण्टासम्म ओली-प्रचण्डबीच गोप्य भेटघाट, के-के बिषयमा भयो छलफल ?
८तनावकाबीच ओली-प्रचण्डबीच गोप्य छलफल जारी, अरु को-को छन सहभागी ?
९मन्त्रीनिवासमा ओली-प्रचण्डका ११ नेताको गोप्य बैठक, सबैलाई चकित पार्दै गरे यस्ताे निर्णय
१०कोरोना कोषमा जम्मा भयो सांसद विकास कोषको खर्च नभएको बजेट
११ट्रम्पले कोरोना भाईरसलाई चीनसँग जोड्दै दिए फेरी यस्तो अनौठो संज्ञा, विश्व नै दंग
१२बलिउडमा अर्को बज्रपात, चर्चित कोरियोग्राफर सरोज खानको उपचारका क्रममा निधन
२ओलीलाई नै झट्का दिदैं एमसीसीबारे प्रचण्डले गरिदिए यस्तो ठुलो घोषणा, नेता कार्यकर्ता नै चकित
३१० गतेपछि फेरी पूर्ण लकडाउन हुने हल्ला चलेपछि ओली सरकारले मुख खाेल्याे, यस्तो छ यथार्थ
४ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खाेजिएकाे खुलासा गरेलगत्तै बाबुराम भट्टराई गरे यस्तो कडा ट्वीट
५दिल्लीले कल्पना नै नगरेको कदम काठमाडाैंले उठाएपछि भारतभर हलचल, के भने मोदीले ?
६सबैको चर्को बिरोधपछि सोफा छोड्न बाध्य भए ओली-प्रचण्ड, भीम राववले बोल्दा क-कसले किन पड्काए तालि ?
८के लद्दाख भि’डन्तमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना पनि मा’रिएका हुन ? चीनले बल्ल दियो यस्तो जवाफ
९लद्दाख भि’ड’न्तमा के चिनियाँ सेना पनि मा’रिएका हुन ? यस्तो छ वास्तविकता
१०भारत-चीनबीचको लद्दाख भि’ड’न्तबारे नेपालको धारणा बाहिरियो, कसलाई के भन्यो ?
१२२० भारतीय सनिकको मृ’त्युलगत्तै चीनले चाल्यो फेरी यस्तो ठुलो कदम, भारतको रुवाबासी, विश्व नै चकित
काठमाडाैं । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भारतमा अन्य राज्य र प्रदेशबाट आएकाहरुलाई गृहराज्यको क्वारेटाइन सेन्टरमा राख्ने गरीएको छ ।
जहाँ क्वारेन्टाइनमा रहेका हरेक ब्यक्तिको खानपानको जिम्मेवारी सरकारका तर्फबाट हुने गरेको छ । यसरी सञ्चालनमा ल्याएका भारतका कैयौं क्वारेन्टाइन कमजोर व्यवस्थापन र खराब नीतिको सिकार भएर चर्चामा छन् । तर बिहारको बक्सर जिल्लाको एक क्वारेन्टाइन भने चर्चामा आउनुको प्रसंग भने निकै रोचक छ ।
खासमा, बिहारको बक्सर जिल्लाको क्वारेन्टाइन चर्चामा आउनुको कारण हो, क्वारेन्टाइनमा रहेका एक युवक । क्वारेन्टाइनमा रहेका २१ वर्षीय अनुप ओझाले निक्कै ढी खाना खाएपछि यसको चर्चा चुलिएको हो ।
उनको खानाको क्षमता बारे सुन्दा पत्याउन निक्कै ग्राहो हुन्छ । शुरुवातमा उनी आएको दिन नै उनले ८५ वटा लिट्टि (समोसा झै गोलो आकारको परिकार) खाएका थिए । त्यसपछि उनको क्षमता बारे क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापनले जानकारी पाएको थियो । दैनिक करिब ४० रोटि र २० प्लेट भात खानु उनको दैनिकी नै हो ।
अनुप राजस्थानमा काम गर्छन । उनी लकडाउनले बिहार फर्केका हुन् । अनुपको खानाको डाइट क्वारेन्टाइनमा मात्र होइन, उनको घरमापनि सोहि अनुसार रहने गरेको छ । उनको गाउँमा उनले एकै पटक १ सय समोसा खाएको रेकर्ड छ । तर उनको शरीरमा खाना अनुसारको मोटोपना छैन । उनको वजन ७० किलोग्राम मात्र छ ।
अनुपका बारेमा अर्को रोचक कुरा के छ भने उनी ज्यादा खाने मात्र होइन अन्य ब्यक्तिको तुलनामा ज्यादा काम पनि गर्दछन् । उनी एक्लैले ५/६ जना बराबरको काम गर्दछन् । अनुपको खानाखाने क्षमताका बारेमा जब अञ्चलाधिकारी समक्ष कुरा पुग्यो तब उनी स्वयम् यसबारे बुझ्न पुगे ।
अञ्चलाधिकारीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापकलाई अनुपले चाहे अनुसारको खानदिन र कुनै अभाव नपार्न निर्देशन दिएका छन् । हुनत क्वारेन्टाइन व्यवस्थापकलाई अनुपलाई ख्वाउन कुनै समस्या छैन । तर क्वारेन्टाइनमा खाना बनाउने भान्सेका लागी भने उनलाई अघाउने खाना खुवाउन निक्कै सकस पर्दै आएको छ ।
क्वारेन्टाइनमा एकै जनाले २० जनाको खान खाइदिएपछि यो खबर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म पुगेको छ । खबर सुनेर उनी तिन छक परेको भारतीय अनलाइनहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
गोप्य वार्तामा ओली-प्रचण्डबीच के भयो कुराकानी, बैठकमा संगै रहेका बिष्णु पौडेलले गरे यस्तो खुलासा
एकाविहानै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस्तो चेतावनी, बाहिर निस्किनुअघि सबैले हेर्नैपर्ने
न्युजिल्याण्डका स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा एकाएक राजीनामाको घोषणा, यस्तो छ कारण
कहिले खुल्दैछ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा ? सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय